Semalt: Ny lahatsoratra tena mahaliana Wiki Articles
Julia Vashneva, Semalt Mpitantana Success Successor, dia milaza fa ny Club Club Wikipédia Freaks dia iray amin'ireo vondrona Facebook malaza sy malaza. Manolotra ny lahatsoratra haingam-pihazakazaka, mahavariana, ary freaky indrindra amin'ny Wikipedia. Avy amin'ny trozona 52 hertz mankany Tarrare, ny zavatra rehetra dia natao ho an'ny mpikambana ao amin'ny Facebook News Feeds. Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny volana septambra 2013, nihanitombo io vondrona io ary nanjary lasa mpikambana maherin'ny 30.000 mahery. Eto izahay dia niresaka momba ireo lahatsoratra malaza indrindra sy vao haingana.
Kentucky Meat Shower
Tsy fihetsika mamoafady mampatahotra izany fa ny toe-javatra mitranga amin'ny toetr'andro. Tany Kent County, Kentucky, tamin'ny volana martsa 1876, dia ny henan'efitra manokana no nilatsaka tao anatin'ny faritra 100 metatra nandritra ny minitra maromaro. Taorian'izay, ireo akora ireo dia nekena ho toy ny vatan'ny tadin'ny soavaly iray.
Ny mpanjakavavin'i Balobedu dia an'i Afrika Atsimo. Nino izy fa afaka mifehy ny rahona sy ny ranonorana. Nandritra ny taona maro, tsy misy ny seza noho ny adihevitra momba ireo ankizy tsy ara-dalàna avy amin'ny mpanjakavavy Rain sy ny tsikera momba ny fiainana tsy manam-paharoa sy mahatalanjona an'i Modjadji.
Ity poeta ity sy ny Buddhist Tibetana dia nahavita nanova ny demony tany amin'ireo andriamanitra fiarovana rehefa avy nandresy azy ireo tamin'ny penis antsoina hoe Thunderbolt of Flaming Wisdom. Kunley koa dia malaza amin'ny fombafomba esoterika amin'ny fametahana saribao eo amin'ny rindrin'i Bhutan..
Ny vatany maty tao Carol Vincent dia hita tao amin'ny efitranony tao Londres, izay hita fa hafahafa sy tsy mahazatra rehefa maty ny faty efa maty nandritra ny telo taona mahery. Satria nomena alalana daholo ny faktiora, nihazakazaka ny fahitalavitra sy ny fanamafisam-peo, ary ny ampahany tamin'ny hofan-dry zareo dia naloany, samy nino avokoa ny rehetra fa velona i Joyce. Andro maro talohan'ny nahafatesany dia nanapaka ny fifandraisana tamin'ireo havany sy namany ny zatovovavy.
Nanjary nalaza io lehilahy alemà io ho namono olona sy nihinana olona nanaiky hihinana. Namoaka dokambarotra tao amin'ny tranokala The Cannibal Cafe izy, izay nolazain'i Meiwes fa nitady olona hamono sy handany azy izy. Lehilahy iray avy any Berlin, Bernd JR "Armand Armando, dia namaly ny dokambarotr'izy io ary namono an'i Penis ny Mewes ary nanamboatra azy tsara.
Jennifer sy June Gibbons
Zaza kambana tsara tarehy ry zareo izay nanenika ny fihetsik'ireo nifamely ary nifampiresaka tamin'ny fomba izay tsy hahazakan'ny olona. Na dia teo aza ny ezaka natao hanasarahana azy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana azy ireo any amin'ny sekoly isan-karazany, dia lasa kisendrasendra ireo kambana ary nanokana ny tenany mandra-pahatonga azy ireo ho tafaraka indray andro. Tsy ela dia lasa mpanao heloka bevava izy ireo ary nalefa tany amin'ny hopitaly, izay naharitra efatra ambin'ny folo taona.
George Herriman dia iray amin'ireo mpanao sariitatra malaza sy malaza Amerikana tamin'ny taonjato faha-20. Izy no malaza amin'ny tantara an-tsary mitondra ny lohateny hoe Krazy Kat. Niantso ny tenany ho Grika izy, saingy ny mari-pahaizana dia nametraka an'i George ho toy ny miloko miaraka amin'ny taranaka mifangaro.
I Abdel no iray amin'ireo mpihira Arabo sy Ejiptiana malaza indrindra. Heverina ho mpanorina ny mozika Arabo izy, ary nanentana ny revolisiona Ejiptiana tamin'ny taona 2011 ny mozikany. Namono tena izy tamin'ny taona 1977, ary tsy nanana Big Pimpin tsy misy an'i Halim mihitsy izao tontolo izao Source .